Musuq-maasuqa Villa Somalia – Somali Sounds
Mid ka mid ah balanqaadyadii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi (Farmaajo) ayaa ahaa in ay dowladiisu la dagaalami doonto musuq-maasuqa dalka ka jira kaasoo gaaray in Soomaaliya noqoto wadanka ugu sareeya dalalka wax musuq-maasuqa adduunka (World’s Corruption INDEX).
Dowladda oo sida muuqata arintaa la dagaalanka musuqmaasuqa ah guullo badan ka soo hoyday ayey hadana u muuqataa inay jirto nasiib daro cusub oo ku habsatay Aqalka madaxtooyada oo ah halka laga bixiyo talada dalka kadib marki ay soo ifbaxeen arimo la xiriiro musuqmaasuq iyo wax is dabamarin culus.
Xubin ka tirsan gudiga shaqada iyo shaqaalaha oo codsaday in aan la shaacin magaciisa ayaa cadeeyay in Cabdirisaaq Xussein Aadan (Caato) oo ah agaasime ku xigeenka madaxtooyada uu dhibaato wayn u gaystay nidaamka shaqada iyo shaqaalaha dalka. Cabdirisaaq Caato wuxuu ku badaley dad ka badan qiyaastii 20 qof (oo dhamaantood qaraabadiisa ah) shaqaale hore oo meesha ka baxay.
Sida xogtani tilmaameyso ayaa Cabdirisaaq Caato wuxuu isticmaalaa awoodda madaxtooyada iyo saaxiibo uu ku lahaa gudiga shaqada iyo shaqaalaha. Waxaa sidoo kale jirta in marar badan ninkan horay loogu soo eedeeyay arimo musuqmaasuq la xiriira iyadoo lagu xusay warbaahinta Soomaalida.
Shaqsiyaadka uu ka mid yahay Cabdirisaaq Caato waxay baabi’inayaan rejooyinka laga qabo shaqooyinka dalka, jiritaanka cadaaladda iyo u sinnaanta xaquuqda; haddii aysan si degdeg ah wax uga qaban dowladda Federaalka Soomaaliya.
Dowlada mareekanka Oo ka hadashay weerarkii lagu qaaday Saldhigooda somalia
Dowladda Mareykanka ayaa war rasmi ah kasoo saartay weerarkii ay Maanta Kooxda Al-Shabaab ku qaaday…
MOGADISHU, Somalia – A roadside bomb explosion has ripped through an Italian armored personnel carrier…
The United States military said it killed a militant in an airstrike near Tortoroow in…
FAAFAAHIN:-Al Shabaab Iyo Mareekanka oo Ku dagaalamay Garnoonka Baladoogle..
Faah-faahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya Qaraxyo maleeshiyaadka Al-shabaab ay goordhaweyd ku weerareen saldhiga ugu weyn ee ciidamada Maraykanku ay ku leeyihiin Soomaaliya kaas oo ku yaalla Garoonka diyaaradaha ee Balodoogle ee Gobolka Shabeelaha Hoose. Weerarka ayaa ku bilowday gawaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa,waxaana xigay dagaal toos ah oo dhexmaray ciidamadda Mareykanka iyo kuwa […]
Wasiir Oomaar oo Madaxa uga taagan Madaxda Hay’addaha hoos yimaada Wasaaradiisa Wasiirka Wasaaradda Gaadiidka iyo Duulista Hawada
May 16, 2019 May 16, 2019 Somali Sounds.com
Md. Maxamed Cabdullaahi Salaad ayaa caado ka yeeshay in uu faragelin joogto ah ku sameeyo shaqada Madaxda Hay’addaha hoos yimaad Wasaaraddiisa sida Hay’adda Duulista Rayidka Soomaaliyeed, Waaxda Gaadiidka Dhulka iyo Somali Airlines. Wasiir Oomaar ayaa isku shaandheeyn aan daah furneen ku sameeyay Madaxda qeybaha ee Waaxda Gaadiidka dhulka ee Wasaaradda taas oo uu dad badan […]
15 Best Oriental Dating Sites & Apps With respect to 2020